Shiinaha WARQADAHA JOOGTADA AH EE SOO SAARKA SUPERMARKET | Aotiyaan
Warqadaha JOOGTADA AH EE SUPERMARKET
Magaca sheyga:Waraaqda kuleylka ah
Cabir:80 * 80 80 * 70 57 * 40 57 * 50
Nolosha shelf:Hal sano
Warqada xasaasiga ah ee kuleylka leh, waxaad dareemi kartaa wax badan oo layaableh .Runti, waxay door muhiim ah ka ciyaareysaa suuqyada laga dukaameysto iyo dukaamada waaweyn .Tusaale ahaan, markaad tagto suuqa laga dukaameysto, dooro alaabta aad u baahan tahay oo lacag ka bixi, qasnajiga ayaa daabacaya rasiid kuu ah, taas oo ah isla warqaddii. maxaa si gaar ah uga duwan waraaqda kuleylka leh? Sidee loo daabacaa warqadan wax iibsashada ah?
Markii aan ka hadleyno daabacaadda, waxaan u dirnaa khad meel gaar ah oo warqadda ka mid ah si gaar ah si aan u helno qoraalka ama sawirada aan dooneyno. Kiimikooyinka ka samaysan warqadda ma nuugaan wax midab ah oo iftiin ah, markaa marka nalku ka soo boodo dusha sare ee warqadda indhaheenna, waxaan arkaynaa in warqaddu caddaan tahay. Midabbada ama midabada ku jirta khadku waxay nuugaan qaar ka mid ah ama dhammaan iftiinka muuqda, si marka khadku loo mariyo dusha sare ee warqadda, dusha sare uu u noqdo midab. Madbacadaha aan ku isticmaalno guriga ama xafiiska inta badan waa madbacado khad-jet ah iyo madbacado leysar ah. Daabacayaasha Ink-jet waxay ku buufinayaan dhibco yaryar oo khad warqad ah, halka daabacayaasha leysku ay tan ku sameeyaan soo jiidashada korantada, marka hore waxay ku dhajinayaan tanarka durbaan khafiif ah kadibna ku wareejinayaan warqad.
Si kastaba ha noqotee, risiidka iibsiga looma daabicin sidan, wuxuu ISTICMAALAA nooc gaar ah oo warqad ah - warqad kuleyl ah.
Marka la barbardhigo warqadda caadiga ah, warqadda kuleylka leh waxay leedahay lakab khafiif ah oo dusha sare ah, oo ay ku jiraan kiimikooyin gaar ah oo loo yaqaan 'cryptochrome dyes'. Dheehu laftiisu midab ma leh, sidaa darteed waraaqda kuleylka ee dhowaan la iibsaday waxay umuuqataa sida cad warqad caadi ah. Si kastaba ha noqotee, marka xaaladaha saxda ah la buuxiyo, waxay ku falceliyaan kiimiko, iyo walxaha cusub ee la abuuray ayaa soo jiidan kara iftiinka muuqda, oo waxaan aragnaa midab. Tusaale ahaan, maaddooyin badan, sida buluugga loo yaqaan 'crystalline violet', in kasta oo aan iyagu midabkoodu keligiis ahayn, haddana waxay isu beddelaan guduud markii ay la kulmaan walxaha aashitada leh, mar labaadna waxay isu beddelaan midab la'aan markii ay la kulmaan walxaha alkaline. Taasi waa, markaan ku daabacno waraaqda kuleylka leh, khadku kuma kaydsan yahay daabacaha, laakiin horeyba wuxuu ugu yaallay warqadda
Hore: INKhiin daabacan
Xiga: WARBIXINTA KOOBKA EE KOOBKA
Waraaqda Iibsiga Supermarket
Warqad Wareejin Hufan, Daabacaadda Warqad Sawirro ah, Waraaq Madoow, Warqad Bir ah oo loogu talagalay Shaati, Warqad Sawir ah oo dhalaalaya oo dhalaalaya, Warqad T-Shirt ah,